Intshayelelo yemveliso yemveliso yezichumiso eziphilayo - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Inkqubo yoyilo kunye nokuveliswa komgca wemveliso yezichumiso eziphilayo zonke. Izixhobo zomgca wokuvelisa ikakhulu zibandakanya umxube we-axis ezimbini, i-granulator entsha yesichumisi, isomisi esomileyo, i-roller cooler, umatshini we-roller sieve, i-crusher ye-chain ethe nkqo, ibhande lokuhambisa, umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo kunye nezinye izixhobo ezincedisayo.
Umgca wemveliso yezichumiso zezinto eziphilayo ilungele:
-Ukuveliswa kwesichumiso se-organic organic
-Ukuveliswa kwesichumiso se-cow organic
-Ukuveliswa kwesichumiso se-pig
-Ukwenziwa kwenkukhu kunye nedada umgquba wezichumiso
-Imveliso yegusha yomgquba yokuvelisa isichumisi
-Ukuveliswa kwesichumiso sendalo emva konyango lwenkunkuma kamasipala.
1, umgquba wezilwanyana: umgquba wenkukhu, umgquba wehagu, umgquba weegusha, umgquba weenkomo, umgquba wehashe, umgquba womvundla, njl.
Inkqubo esisiseko yemveliso yezichumiso eziphilayo kubandakanya: ukugaya izinto zokwenza imveliso → ukubila → ukuxuba izithako (ukuxubana nezinye izinto ze-organic-inorganic, i-NPK≥4%, into ephilayo ≥30%) → i-granulation → ukupakisha. Qaphela: le layini yemveliso yeyokujonga kuphela.
Asinakho ukubonelela kuphela ngenkqubo yemveliso yezichumiso egqibeleleyo, kodwa ikwabonelela ngesixhobo esinye kwinkqubo ngokweemfuno zokwenyani.
1. Umgca wemveliso yezichumiso eziphilayo usebenzisa ubuchwepheshe obuphambili bemveliso, obunokugqibezela imveliso yezichumiso eziphilayo ngexesha.
2. Sebenzisa i-granulator entsha enelungelo elilodwa lomenzi elilodwa lesichumiso sezinto eziphilayo, elinamazinga aphezulu e-granulation kunye namandla e-particle aphezulu.
3. Izinto ezingafunekiyo eziveliswa sisichumiso semvelo zinokuba yinkunkuma yezolimo, imfuyo kunye nomgquba weenkukhu kunye nenkunkuma yasekhaya yasezidolophini, kwaye izinto eziluhlaza ziyakwazi ukuziqhelanisa.
Ukusebenza okuzinzileyo, ukumelana nokubola, ukunxiba ukuxhathisa, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ubomi obude benkonzo, ulondolozo olufanelekileyo kunye nokusebenza, njl.
5. Ukusebenza okuphezulu, izibonelelo ezilungileyo zoqoqosho, izinto ezincinci kunye nolawulo kwakhona.
6. Ukucwangciswa kwemigca yokuvelisa kunye nemveliso inokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi.
Izixhobo zokuvelisa isichumiso se-organic zibandakanya izixhobo zokuvundisa, umxube we-axis kabini, umatshini omtsha we-organic granulation, i-roller dryer, isigubhu esipholileyo, umatshini wokuhlola igubu, isilo, umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo, isityumzi setyathisi ethe nkqo, ibhanti yokuhambisa, njl.
Inkqubo yemveliso yezichumiso eziphilayo:
1) inkqubo yokubila
Uhlobo lwesomelelo sesomisi sesona sixhobo sokusetyenziswa sisetyenziswa kakhulu. Isitaki esine-grooved siqulathe itanki yokubila, umkhondo wokuhamba, inkqubo yamandla, isixhobo sokufuduka kunye nenkqubo yeqashiso. Inxalenye yokubhukuqa iqhutywa ngabaqengqeleki abaphambili. I-Hydraulic flipper inokunyuka kwaye iwele ngokukhululekileyo.
2) inkqubo yegranulation
Uhlobo olutsha lwegranulator yezichumiso zezinto eziphilayo isetyenziswa kakhulu kwi-organic granulation yezichumiso. It is a granulator okhethekileyo wezinto ezingafunekiyo ezinjengendle yezilwanyana, iziqhamo ezibolayo, amaxolo, imifuno eluhlaza, isichumiso esiluhlaza, isichumisi saselwandle, isichumisi sefama, inkunkuma ezintathu, ii-microorganisms kunye nezinye izinto zenkunkuma. Inezinto ezilungileyo zexabiso legranulation ephezulu, ukusebenza okuzinzileyo, izixhobo ezizinzileyo kunye nobomi benkonzo ende, kwaye lukhetho olufanelekileyo lokuvelisa isichumiso semvelo. Izindlu zalo matshini zamkela umbhobho ongenamthungo, ozinzileyo ngakumbi kwaye ungakhubazi. Idityaniswe noyilo lwedokodo lokhuseleko, ukusebenza komatshini kuzinzile. Amandla okunyanzelwa kwegranulator entsha yesichumiso se-organic iphezulu kunaleyo ye-granulator yediski kunye ne-drum granulator. Ubungakanani beengqungquthela bunokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi. I-granulator ifanelekileyo kakhulu kwi-granulation ngqo yenkunkuma emva kokuvumba, ukugcina inkqubo yokumisa kunye nokunciphisa kakhulu iindleko zokuvelisa.
3) inkqubo yokumisa nokupholisa
Umxholo wamasuntswana wokufuma emva kwe-granulation yi-granulator uphezulu, ke kufuneka umiswe ukuze uhlangane nomgangatho womxholo wamanzi. Isomisi sisetyenziselwa ukomisa amasuntswana ngomswakama othile kunye nobungakanani bamasuntswana kwimveliso yesichumiso somanyolo esidityanisiweyo. Ubushushu bamasuntswana emva kokumisa buphezulu kakhulu, kwaye kufuneka bupholiswe ukuthintela isichumisi ekuxinaneni. Ukupholisa kusetyenziselwa amasuntswana okupholisa emva kokumisa kwaye kusetyenziswa ngokudibanisa nesomisi esijikelezayo, esinokuphucula kakhulu ukusebenza kokupholisa, ukunciphisa amandla abasebenzi, ukonyusa isivuno, ukuqhubeka nokususa ukufuma kwamasuntswana kunye nokunciphisa ubushushu besichumiso.
4) inkqubo yokuhlola
Kwimveliso, ukuze kuqinisekiswe ukufana kwemveliso egqityiweyo, amasuntswana kufuneka ahlolwe ngaphambi kokupakishwa. Umatshini wokuqengqeleka kweRoller sisixhobo esiqhelekileyo sokuqhawula kwinkqubo yokuvelisa isichumisi esimbaxa kunye nesichumiso sendalo. Isetyenziselwa ukwahlula iimveliso ezigqityiweyo kunye nezinto ezingahambelaniyo kunye nokufezekisa ukuhlelwa kweemveliso ezigqityiweyo.
5) inkqubo yokupakisha
Emva kokuba kusebenze umatshini wokupakisha, i-gravity feeder iqala ukusebenza, ilayishe izinto kwi-hopper enobunzima, kwaye iyifaka engxoweni nge-hopper enesisindo. Xa ubunzima bufikelela kwixabiso elingagqibekanga, umxhasi womxhuzulane uyayeka ukusebenza. Umqhubi ususa izinto ezihlanganisiweyo okanye abeke ibhegi yokupakisha kwibhanti yokuhambisa kumatshini wokuthunga.